कोरोना संकटले स्टक मार्केटमा पहिरो, नआत्तिनुस् ! टिक्नलाई अपनाउनुस् यी ५ गोल्डेन रुल Bizshala -
कोरोना संकटले स्टक मार्केटमा पहिरो, नआत्तिनुस् ! टिक्नलाई अपनाउनुस् यी ५ गोल्डेन रुल
काठमाण्डौ । सेयर बजारलाई अनिश्चिताको बजारका रुपमा मानिन्छ। बजारको उत्तारचढाव नै सेयर बजारको सुुन्दर पक्ष पनि हो।
नेपालको सन्दर्भमा नेप्से परिसूूचकको उत्तारचढावमा बजारको पहिरोबाट सोत्तर भई सडकमै आइपुुगेका सेयर बादशाह निर्मल प्रधान पनि पुुनः यही बजारले अहिले माथि छन्। अर्थात् सेयर बजारमा लगानी गर्नुलाई ठूूलो मानिँदैन तर यसमा रहिरहन वा टिकिरहन सके त्यो व्यक्ति सेयर बजारको यात्रामा सफलताको डुुंगामा सयर गर्ने अवसरको असली भागीदार बन्न सक्छ।
बजारको विशेषता नै घट्नुु र बढ्नुु हो। यही बजारको घटबढमा अहिले कोरोनाभाइरसकै कारण नेप्से परिसूूचक १६०० पार गरिसकेको समेत झरेर १२०० विन्दुमा आइपुुगेको छ। बजारमा भएको तीव्र गिरावट र बजारको बढाइबाट कसरी कमाउने विषयमा हामी केही टिप्स दिँदैछौं।
स्टक मार्केटमा गइरहेको पहिरोमा टिकिरहनका निम्ति ५ गोल्डेन रुल अनुुभवी खेलाडी यस्तो मन्त्र अपनाउँछन्, जो अस्थिरको मुुकाबला गरी आफ्नो पोर्टफोलियो सुुरक्षित बनाउन सक्षम हुुन्छन्। के छ यस्तो डिफेन्सिभ धारणा वा गुुण ? आउनुुस् जानौं ता कि तपाइँ पनि यो संकटपूर्ण अवस्थामा सेयर बजारमा टिकिरहनुुस्।
बजारको दिशालाई सम्मान
सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा महत्वपूूर्ण हरेक कारोबारीले बजारको दिशालाई सम्मान गर्नैपर्छ। बजारमा ‘भावना’ भगवान हो र ‘ट्रेन्ड’ साथी होजस्ता प्रसिद्ध स्वयंसिद्ध वाक्य धेरै लोकप्रिय छ। यसले यो संकेत दिन्छ कि प्रत्येक व्यापारीले बिना जिद्दी बजारमा भइरहेको दिशालाई सम्मान गर्नुुपर्छ। हामी सबैले ट्रेन्ड दिशाको आंकलन गर्नका लागि चलेका औसतका विभिन्न रुपहरुको प्रयोग गर्छन्।
यो सबैका लागि सजिलो प्रतिक्रिया हो। यद्यपि जब बजार अस्थिर हुुन्छ तब कारोबारी काउन्टर सहज हुुुन्छ। यस कारण कि मानवीय पूूर्वाग्रह डर र लालच दुुवै भावनाबाट प्रेरित हुुन सक्छ। जोखिम व्यवस्थापन सधैँ तपाइँको लगानीको एक महत्वपूूर्ण पक्ष हो। आफ्नो जोखिम कम गर्नका लागि तपाइँले अनिवार्य स्टपलस नियमको पालना गर्न जरुरी ठहर्छ। आखिरीमा बचाइएको पैसा नै कमाइएको पैसा बराबर हो।
लिभरेज ट्रेडिङबाट बच्ने
यदि तपाइँ आफ्नो दाउ सही लगाउनुुुहुुुन्छ तब लिभरेज ट्रेडिङ तपाइँलाई एक उच्चस्तरीय रिटर्न दिन्छ। यदि थोरै गल्ती भएमा तपाइँ आफ्नो लगानी पुुरै गुुुमाउनुपर्ने हुुन्छ। अस्थिरताका दौरान बजारमा उत्तारचढाव आइरहन्छ र धितोपत्र उच्च र निम्न स्तरको मूूल्यका बीच घुुमिरहन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै धितोपत्र बिना कुुनै सूूचना पनि सामान्य प्रवृत्तिले बढ्न सक्छ। यसका लागि लिभरेज ट्रेडिङ केवल तपाइँको उच्च जोखिम बढ्छ र यसबाट जोगिनुुपर्छ।
झर्ने चक्कु समात्नबाट बच्ने
यदि तपाइँ झरिरहेको चक्कु पक्रन कोसिस गर्नुुहुुन्छ भने तपाइँलाई चोट लाग्ने सम्भावना धेरै हुुन्छ। यस्तो कठिन समयमा तपाइँ वर्तमान अवस्थामा कारोबार औसतसहित केही प्रथाबाट बच्नुुुपर्छ। तिनीहरुले बजारको कमेन्टहरु बाहिर ल्याउने छैन। तपाइँले पहिलो चीजमा स्थिर हुुन दिइनुुपर्छ र फेरि गुुणस्तरीय प्रस्तावमा उद्यम सुुरु गर्न आवश्यक छ।
सानो स्टक (कम टिकट आकार स्टक) खरिद नगर्नुुस्
कोरोनाभाइरसजस्तो संकटका दौरान केही कमजोर स्टक प्यानिक स्टक बन्न जान्छ वा दुई अंकको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ। बजारदेखि ‘बाई लो सेल हाई’ को मन्त्र निकै प्रभावकारी छ। यस्तो बेलामा खरिदकर्ता उनीहरुलाई खरिद गर्न उत्सुुकता महसुुस पैदा गर्छ। यस्तो पैसा स्टक सामान्यतया त्यसपछि बढ्दैन। केही अपवाद अवस्य हुुन्छ तर तिनीहरु जोखिम उठाउन लायक हुुँदैनन्। यो यस्तो गुुण हो जसले वित्तीय अनिश्चितताका दौरान हरेक लगानीकर्ताले अपनाउन आवश्यक छ। यस्तो बेलामा सम्बद्ध जोखिमबाट तपाइँ आफ्नो पोर्टफोलियो बचाउन लामो यात्रा तय गर्न सक्नुुहुुन्छ।